Cusboonaysii Xidhmada 7 ee LMDE | Laga soo bilaabo Linux
Haddii aad isticmaaleysid LMDE (aka Linux Mint Debian Edition), way fiicantahay inaad ogaato inaad horeyba u haysatay Cusboonaysiinta Xidhmada 7 qaybinta this.
Si tan loo sameeyo, waxa ugu horreeya ayaa ah in muraayadaha si wanaagsan loogu hagaajiyo cusbooneysiintan. Hubso inay yihiin kuwan:
Kadib waxaad sameyn kartaa cusbooneysi caadi ah adoo adeegsanaya Maareeyaha Cusboonaysiinta.
Inta lagu jiro cusbooneysiinta waxay na weydiin doontaa halka lagu rakibo GRUB, waana inuu doortaa "caadi ahaan" / dev / sda
ISO soo socda ee LMDE wuu la bixi doonaa Cusboonaysiinta Xidhmada 8 oo ay ku jiraan (waxyaabo kale) Cinnamon 2.0 y MATA 1.8.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Cusboonaysii Xidhmada 7 ee LMDE
Aad u fiican, in kastoo aan durba bilaabay inaan jeclaado Arch.
majajaro ayaad isticmaaleysaa ?? ama archlinux….
Waxaan jeclaan lahaa inuu jiro nooc rasmi ah oo leh KDE.
Waxaan u soo jeedinayaa SolydXK kiiskaas.
Waxaan jeclaan lahaa inaan arko kan Cinnamon 2.0, sida uu sheegayo Clem qaabkan kumbuyuutarkiisu wuu joogsan doonaa iyadoo kuxiran Gnome.
* ku tiirsanaanta
Haddii taasi macnaheedu tahay inay sii fududaanayso, aad u fiican.
In kasta oo hadda oo aan KD3 ku tijaabiyay kombuyuutarka kale, oo aan jeclahay waxa soo hagaagay, xoogaa waan qasan yahay 😀
Hadda waxaan ku jiraa Mint 13 oo leh Cinnamon 1.8 oo laga rakibay gadaasha dhabarka waxayna iga cunaysaa wax yar oo ka badan 350 MB, waxa gaabiska ah waa waqtiga ay ku qaadaneyso in lagu rakibo desktop-ka (isla dhibaatada KDE), lafteeda lafteeda way ka fudud tahay Midnimada.
Tan "distro" waxaan ku jeclahay saaxiibtiis halkaasoo xiriirku uusan shaqeyn ka dib dhowr toddobaad ka dib mararka qaarna waxaad ka fikirtaa waxa dhici kara iyo wixii aan sameyn.
Ma aqaano haddii ay tahay shaqaale la'aan ama awood, laakiin waxa ay daboolayaan ma maamulayaan inay si wanaagsan u taageeraan, midkoodna nooca Ubuntu ku saleysan, ama nooca Debian-ka ah.
Nooca Ubuntu-ku-saleysan aniga waa fiican yahay, laakiin in la yiraahdo LMDE waa laga tagay waxay hoos u dhigeysaa astaanta, SolydXK ayaa aad uga wanaagsan MATE / qorfe la rakibey.
iga raali noqo jahliga..Waxaan dhawaanahan isticmaalay LMDE. Sideen u dhigaa muraayadaha mahadsanid.
Haddii aanan khaldamin, waxaa laga sameeyaa maareeyaha cusbooneysiinta> wax ka beddel> ilaha software-ka> Linux Mint software> Ka soo dejiso… halkaasna waxaad ku leedahay dhammaan xulashooyinka.
liibaan 669 dijo
Kaliya waxaan aqriyay maqaal ku saabsan sii deynta isla degelkan (ma aanan ogeyn inay jireen ilaa maanta xD) maqaalkuna wuxuu umuuqdaa inuu horeyba dhaqan u lahaa, ujeedku wuxuu yahay halkaas inay ku leeyihiin LMDE dhab ahaan isma rogaan maxaa yeelay waa ku saleysan tijaabada ... taasi miyaa sii socota ??
Ku jawaab alohl669